फौजदारी कसूरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने विधेयक | गृहपृष्ठ
Home अर्थान्तर फौजदारी कसूरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने विधेयक
on: २७ आश्विन २०७४, शुक्रबार १७:२५ अर्थान्तर
वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् सांसद
रामनारायण बिडारीको जन्म २०१६ सालमा मकवानपुर टिष्टुङमा भएको हो । २०४३ सालमा नेपाल ल कलेजबाट कानूनमा स्नातक गरेका बिडारी ३५ वर्षदेखि कानून व्यवसायीका रूपमा कार्यरत छन् । उनी २०७० सालमा संविधान मस्यौदा विज्ञ समूहको सदस्यसमेत रहेका थिए । हाल उनी विधायन समितिको सदस्य एवम् फौजदारी कसूरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन विधेयकको संयोजक रहेका छन् ।
विधेयक नयाँ, आधुनिक र वैज्ञानिक
सुरक्षित नेपालमा फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण गर्ने र निर्धारण गरिएको सजायलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी ऐनको अभाव थियो । भएका सम्बन्धित ऐन पनि छरिएर रहेका र समयसापेक्ष पनि थिएनन् । त्यस्ता ऐनमा कारागार ऐन, कारागार नियमावली र मुलुकी ऐनको दण्ड सजायसम्बन्धी ऐन पर्थे । त्यसैले पनि फौजदारी कसूरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनको आवश्यकता हुन पुगेको हो । यस्तो ऐन दक्षिण एशियामै पहिलो हुँदै छ । यस्तो खालको ऐन जापान, यूरोपेली मुलुक तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्नियालगायतमा छ । त्यस्तै ऐन बनाउने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो । यो ऐन नेपालमा नयाँ र सबभन्दा आधुनिक हुनेछ । यो विधेयक अपराधी भनेको रोगी हो र अपराध भनेको रोग हो भन्ने अभिव्यक्तिबाट पे्ररित छ । रोगबाट रोगीलाई कसरी उपचार गर्ने भन्ने विषय छन् । अपराधीलाई सुधार गर्ने, उपचार गर्ने र रोग निको पार्ने तथा समाजमा स्थापित गराउने उद्देश्यले यो विधेयक बनेको छ ।
यो विधेयकले प्रोवेशन अधिकृत राख्ने र प्यारोल अधिकृत र प्यारलबोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रोवेशन अधिकृत भनेको कुन सजाय मुल्तबीमा राख्ने, कुन सजायलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर निर्णय गर्न हरेक अदालतमा राखिने अधिकृत हो । यो प्रोवेशन अधिकृतको नियुक्ति नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम गर्छ । प्यारोल अधिकृत भनेको सजाय निलम्बन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र अपराधीलाई सुधार गर्ने अधिकृत हो ।
यो ऐन सबै फौजदारी कसूरमा लागू हुन्छ । तर, तीनओटा विषयमा लागू हुँदैन । अदालतको अपहेलानामा, संसद्को विशेषाधिकारमा र कुनै कानूनले यो ऐन लागू हुने छैन भनेर तोकेको अवस्थामा मात्र यो ऐन लागू हुँदैन ।
यसमा सजाय गर्दा खुला इजलाशबाट गरिन्छ । अपराध गरेको मध्ये सबभन्दा ठूलो कसूर कुन छ, त्यसमा मात्र सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । सजाय गर्नुभन्दा अगाडि तोकिएको अधिकारीले सजाय पाउनेको सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यक्तित्व, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कसूर गर्दाको परिस्थिति, यसको चालचलन, कसूरदारको उमेरजस्ता विषयको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिन्छ । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा अपराधीलाई सजाय गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबारे विधेयकमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । यस विधेयकमा कसूरदारलाई आफूले गरेको कसूरको प्रायश्चित्त गराउने, समाजमा पुनःस्थापना गराउने, कसूरदारलाई समाजमा अन्तरघुलन गराउने, कसूरदारलाई अपराधको बोध गराई पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिने व्यवस्था गरेको छ ।
सजाय पनि त्यसै निर्धारण गर्न पाइँदैन । पहिला कसूरदार ठहर गरी सजाय कति गर्ने भनेर सुनुवाइ गर्नुपर्छ । यसका लागि बहस पनि छुट्टै हुनेछ । सजाय निर्धारण गर्नुपर्दा कस्तो सजाय गर्नुपर्ने हो, घटी वा बढी के हुन्छ, कस्तो प्रकारको अवस्थामा यो कसूर गरेको हो भन्ने विषय छुट्याउनुपर्छ । यसमा अरू पनि कसूरदार छन् कि छैनन् अथवा यो कसूरदारले अपराध गरेको छ कि छैन भनी मिलाएर सबैलाई समानुपातिक ढङ्गबाट कसूर निर्धारण गर्नुपर्छ ।
यसले बालबालिकालाई पनि संरक्षण गरेको छ । बालबालिकालाई कसूरमा सजाय गर्दा बालबालिकाको हित हुने गरी गर्नुपर्छ । दोषीलाई कानूनको गम्भीरता हेरेर सजाय गर्नुपर्छ । नाबालकलाई कतिपय अपराधमा सजाय नै गर्नुको सट्टा लिखित कागज गराएर छोडिदिने व्यवस्था पनि छ ।
यस विधेयकमा अपराधीलाई जरीवाना गर्ने व्यवस्था पनि विशेष खालको छ । अत्यधिक जरीवाना गर्न नहुने र अपराधीले थेग्न सक्ने खालको मात्र जरीवाना गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । पीडित व्यक्तिलाई कति क्षति भएको छ, कति क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ, जरीवाना नतिरेबापत सरकारलाई पर्नसक्ने दायित्व कति हो, यी सबै अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मात्र जरीवाना तोक्नुपर्छ ।
यो विधेयकको कयौं दफा नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको मितिदेखि मात्र लागू हुने व्यवस्था छ । अपराधीलाई सामुदायिक सेवासम्बन्धी काममा लगाउने र उसको कैद त्यसबाट कट्टा गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
यसै गरी विधेयकले कैद निलम्बन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । कुनै कसूरदारले कम सजायको अपराध गरेको छ भने त्यसलाई निलम्बन पनि गर्न सक्छ । त्यसलाई सुधार गर्ने मौका दिने र सुधार गरेको अवस्थामा कैद निलम्बन हुन्छ । यस्तो अवस्था कर्तव्य ज्यान मुद्दामा हुँदैन, जसमा करणी, मानव बेचबिखन, हतियार, भ्रष्टाचार, लागूऔषधजस्ता मुद्दा पर्छन् । सुधार गृहमा पठाउनुपर्ने अपराधीलाई पठाउन सक्ने पनि व्यवस्था छ ।
यो विधेयक प्रगतिशील, वैज्ञानिक, आधुनिक, अपराध न्यूनीकरण गर्ने खालको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा हाम्रो देशको पूर्वाधार र राजनीतिक परिवेशले अप्ठ्यारो पारेकाले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको मितिदेखि लागू हुने गरी नयाँ प्रावधान राखिएको छ । यो ऐन २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
विधेयकको मुख्य व्यवस्था
डा. कमलशाली घिमिरे
सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
विक्रम संवत् १९१० को मुलुकी ऐनको जगमा विकास भएको कानूनी व्यवस्थालाई एक्काइसौं शताब्दीको सूचनाप्रविधिको विकास र औद्योगिकीकरणमा भएको परिवर्तनलाई सम्बोेधन गर्न तथा समाजको बदलिँदो सन्दर्भ र आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्ने गरी समयानुकूल बनाउनु आवश्यक थियो । नेपाल सरकारले कानून र संहितालाई समयानुकूल बनाउन व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश गरेको मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता तथा फौजदारी कसूरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयकहरू व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने प्रक्रियामा रहेका छन् । २०७५ साल भदौ १ गतेबाट लागू हुने प्रस्तुत विधेयकको कार्यान्वयनसँगै नेपालको कानूनी प्रणालीमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास लिइएको छ ।
हाल व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भएका विधेयकमध्ये फौजदारी कसूरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक नेपालको कानून प्रणालीका लागि बिलकुलै नयाँ व्यवस्था हो । यसमा न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र सुरक्षित समाज सृजना गरी सर्वसाधारणको हित र सदाचार कायम गर्न फौजदारी कसूर गर्ने कसूरदारलाई उचित सजाय निर्धारण गर्ने तथा त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल फौजदारी मुद्दामा सुनुवाइ हुँदा कसूर ठहर भएको अवस्थामा सजाय निर्धारणसमेत सँगसँगै हुने व्यवस्था रहेको छ । मुद्दामा कसूर ठहर गर्दा तथ्यका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ भने सजाय निर्धारण गर्दा कसूर गर्दाको अवस्था र परिस्थितिले समेत महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । कानूनमा सामान्यतया न्यूनतम र अधिकतम सजायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा न्यायकर्ताले सजाय निर्धारण गर्दा कसूर गर्दा अवस्था र परिस्थितिसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । कसूर ठहर गर्दाकै बखत सजाय निर्धारणसमेत गर्दा कसूर गर्दाको अवस्था र परिस्थितिसम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्य उजागर हुन नसक्ने र यसबाट कसूरदारलाई हुने सजाय कम वा बढी हुन सक्ने अवस्था रहन्छ ।
यो ऐन कार्यान्वयन भएपछि कुनै फौजदारी मुद्दामा निर्णय हुँदा कसूर कायम भएमा सो कसूरदार ठहरिएको व्यक्तिलाई सजाय गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै सुनुवाइ गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी सजाय गर्दा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम कसूरको गम्भीरता घटाउने वा बढाउने कुराको समेत आधार लिनुपर्ने हुन्छ । अदालतले सजाय निर्धारण गर्नुअघि कसूरदारको व्यक्तिगत, सामाजिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कसूर गर्दाको परिस्थिति, कसूर गर्नुअघिको कसूरदारको चालचलन, कसूरदारको उमेरलगायत विषयमा प्रतिवेदन लिन सक्नेछ । यसबाट कसूरको अवस्था, कसूर गर्दाको परिस्थिति तथा कसूरदारको वैयक्तिक, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थासमेतको विषयमा नयाँ तथ्य उजागर हुनसक्ने र सोबाट कसूरदारलाई सजाय निर्धारण गर्ने कार्य वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ भई कसूरदार ठहरिएको व्यक्तिलाई उचित सजाय हुने विश्वास लिइएको छ ।
हालसम्मको हाम्रो फौजदारी न्यायप्रणालीले विशेष गरी दण्डात्मक प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दै आएकोमा प्रस्तुत ऐनले सुधारात्मक प्रणाली अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयक प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएपछि अदालतले कसूरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दा कसूर गर्न कसूरदार वा अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साहित गर्ने, समाज वा समुदायलाई सुरक्षा गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित न्याय प्रदान गर्ने, कसूरदारलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्न सहयोग गर्ने वा सुधार गर्ने, समाजबाट अलग राख्ने, आफ्नो कार्यप्रति पश्चात्ताप बोध गराई पीडित वा समुदायलाई हानिनोक्सानी भएको छ भन्ने कुराको अनुभूति गराउने, कानूनद्वारा निषेधित आचरणको निन्दा गर्नेसमेतका कुन उद्देश्यले सजाय दिइनुपर्ने हो सो कुरामा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सजाय निर्धारण गर्दा कसूरको गम्भीरता र दोषको मात्रा, परिस्थिति, कसूरको गम्भीरता बढाउने वा घटाउने अवस्थाहरू, कसूरदारको आचरण र विगतको क्रियाकलाप तथा सजायको उद्देश्यलाई समेत विचार गर्नुपर्ने, बालबालिकालाई सजाय गर्दा विचार पुर्‍याउनुपर्ने, जरीवाना गर्दा लिनुपर्ने आधारसमेतको व्यवस्था प्रस्तुत विधेयकमा गरिएको छ ।
सजाय निर्धारण गर्दा सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिने, कैद सजाय निलम्बन गर्न सकिने, सुधार गृहमा पठाउने, पुनःस्थापना केन्द्रमा पठाउने, सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने, खुला कारागारमा राख्न सकिने विषयलाई विचार गर्नुपर्ने विषयसमेत विधेयकमा समावेश गरिएको छ । कैदमा रहेका व्यक्तिहरूको आचरण सुधार गर्न तथा कैदपछिको जीवनलाई सहज बनाउन सामाजिकीकरण गराउनुपर्ने, सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेजस्ता व्यवस्था विधेयकमा रहेका छन् ।
फौजदारी न्यायप्रणालीको एक महत्त्वपूर्ण अंशका रूपमा रही हालसम्म ओझेलमा पर्दै आएको पीडित पक्षलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था प्रस्तुत विधेयकमा छ । पीडितलाई पुगेको भौतिक, शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक क्षति, पीडितको मृत्यु भइसकेको भए निजको हकवालालाई पर्न गएको क्षति, कसूरदारको आर्थिक स्रोत र अवस्था, पीडित तथा निजमा आश्रित व्यक्तिको अवस्थासमेतलाई विचार गरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी कुनै कसूरका सम्बन्धमा क्षतिर्पूति लिनेदिने सम्बन्धमा पीडित र कसूरदारले सहमति गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ भने पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि पीडित राहत कोष खडा गर्ने विषयसमेत समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी सजाय निर्धारण सम्बन्धमा सुझावसमेत दिने प्रयोजनका लागि स्थायी संयन्त्रका रूपमा महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा सजाय सुझाव समिति गठन हुने व्यवस्था गरिएकाले सजाय निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थालाई समसामयिक रूपमा सुधार गर्दै लैजान थप मद्दत पुग्नेछ ।
कसूरदारलाई सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिने, कैदसजाय निलम्बन गर्ने, सुधार गृहमा पठाउने, प्यारोलमा राख्ने, सामाजिकीकरण गर्नेजस्ता कार्यका लागि थप भौतिक, कानूनी तथा व्यवस्थापकीय तयारी गर्नुपर्ने प्रावधान नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
अन्त्यमा, धेरै लामो समयदेखिको मेहनत र प्रयासको फलस्वरूप व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भएका विभिन्न संहितासहित फौजदारी कसूरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी कानूनको उचित कार्यान्वयनबाट नेपालको कानूनी तथा सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुनेछ । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकार, अदालत, सरकारी वकिल, कानून व्यवसायी, नागरिक समाजलगायत सम्बन्धित सबैको सकारात्मक भूमिका आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
विधेयक बनाउँदा अन्तरराष्ट्रिय दबाब छैन
विधायन समिति सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद्
फौजदारी कसूरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने विधेयकको आवश्यकता अहिले किन पर्‍यो ?
हामी अहिले कानूनी राज्यलाई पूर्णता दिने क्रममा कानूनी सर्वोच्चता, विधिको शासन, न्यायालयको स्वतन्त्रताका पक्षमा उभिएका छौं । त्यसैले कानूनलाई कसैले आफ्नो हातमा लिएर दुरुपयोग नगरोस् भन्ने विषयमा हामी सचेत छौं । योभन्दा पहिले फौजदारी कसूरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्नका लागि स्पष्ट व्यवस्था थिएन । तसर्थ यो संसद्ले विधेयको आवश्यकता महसूस गर्‍यो । अहिले कुनै पनि फौजदारी कसूरमा न्यायाधीशले स्वविवेक प्रयोग गरेर सजाय निर्धारण गर्ने परिस्थिति छ । कहिलेकाहीँ त बढी सजाय पाउनेलाई कम र कम सजाय पाउनेलाई बढी सजायको फैसला भएको उदाहरण पनि देखिएको छ । औचित्य पुष्टि नभई र कारण नखुलाई आधारविना न्यायाधीशले स्वविवेकी ढङ्गले सजाय निर्धारण गरेका मुद्दासमेत देखियो । कसूर गर्नेले कसूरबमोजिमको सजाय भोग्नुपर्छ, कसूर गर्नेलाई पनि मैले कसूर गरेबापत सजाय पाएको हुँ भन्ने आत्मग्लानीसहित चित्त बुझाउने खालको सजाय हुनुपर्छ । यिनै विषयलाई दृष्टिगत गरी फौजदारी कसूरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन विधेयकको आवश्यकता महसूस गरी विधेयक निर्माण गरिएको हो ।
यस्तो विधेयक तयार गर्न जाइका नेपाललगायत अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्थाको सहयोग आवश्यक छ त ?
आवश्यक छ, किनभने कानूनी राज्य, विधिको शासन, अन्तरराष्ट्रिय शान्तिसुरक्षा, अमनचैन र पारस्पारिक सम्बन्ध बढाउँदै विश्वमा सरसहयोग गर्न अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्था निर्माण गरिएका हुन् । नेपालमा कुनै पनि कसूरको सजाय निर्धारण गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार जस्तै न्यायालय, कसूरको सजाय भोग्न कारागार, कैदीहरूलाई पनि मानव अधिकारको उपभोग गर्न पाउने खालका आर्थिक, भौतिक, नैतिक, सामाजिक कानूनी, सहयोगको आवश्यकता छ ।
त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको पनि आवश्यकता छ ।
सहयोग लिँदा विदेशीहरूको इच्छाबमोजिम कतिपय कानूनी प्रावधान राखिएका छन् भन्ने आरोप छ नि ?
यो सरासर झूट हो, विदेशीहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि भन्दा पनि अन्तरराष्ट्रिय शान्ति, सहयोग र समन्वयका लागि सहयोग गर्नुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्था खुल्नुको उद्देश्य पनि त्यही हो । त्यसैबमोजिम सहयोग भएको हुन सक्छ । यदि उनीहरूको इच्छाबमोजिम कानूनी प्रावधान राखिएको छ भने हामीले अस्वीकार गर्नुपर्छ । यसमा हामी सबैको भूमिका छ । मेरो विचारमा त्यस्तो भएको छैन ।
यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि कानूनी सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकारको संरक्षण, न्यायालयप्रति स्वविवेकी हमलाको अन्त्य, न्यायाधीशको स्वैच्छिक विचार लागू नहुने, भ्रष्टाचार नमौलाउने र पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्नेछन् । पीडकले कसूरअनुसारको सजाय भोगेको महसूस गर्नेछन् ।
फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकका उद्देश्यहरू केके हुन् ?
फौजदारी मुद्दामा कसूरदार ठहर हुँदाका बखत नै सजाय तोक्ने हालसम्मको अभ्यासलाई परिवर्तन गरी कसूरदार ठहर भइसकेपछि छुट्टै सुनुवाइ गरेर सजाय निर्धारण गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो । यसका अन्य मुख्य विषय सजाय निर्धारणको आधार बनाउने, कम सजाय भएको कसूरदारलाई सामुदायिक सेवा वा सुधार गृहमा पठाउने, खास किसिमका कसूदारलाई पुनःस्थापना केन्द्रमा पठाउने, खुला कारागार वा प्यारोलमा राख्न सकिने रहेका छन् । कसूरको क्षतिबापत पीडितलाई भराउनुपर्ने उचित क्षतिपूर्ति निर्धारणका आधार तोक्ने व्यवस्था गरी न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण, सुरक्षित समाज सृजना गरी सर्वसाधारणको हित र सदाचार कायम राख्ने विधेयकको उद्देश्य हो ।
फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने विधेयक किन ल्याइयो र यो विधेयक आजसम्म नल्याइनुको कारण के थियो ?
२०२० सालको मुलुकी ऐनको व्यवस्था परम्परागत रूपमा रहेको थियो । मुलुकी ऐन तत्कालीन सामाजिक परिवेशमा उचित मानिए थियो । तर, अहिलेको अवस्थामा यो ऐन समयानुकूल छैन । यसलाई समयसापेक्ष र न्यायपूर्ण बनाउँदै सर्वसाधारणको हितका निमित्त यो विधेयक ल्याइएको हो । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आधारमा यो विधेयक ल्याइएको छ । जहाँसम्म विधेयक नल्याइनुका कारणको विषय छ, त्यतातिर प्रवेश नगर्दै राम्रो होला ।
यस्तै प्रकृतिको विधेयक अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा रहेको छ ? अन्तरराष्ट्रिय जगत्को भन्दा नयाँ के छ ?
यस विधेयकमा लोकतान्त्रिक मुलुकहरूका मुख्य सिद्धान्तहरू मिल्छन् । विश्वव्यापी सिद्धान्त र मापदण्डका आधारमा कानून बन्छन् । नयाँभन्दा पनि आम नागरिकको भावना समेट्ने गरी र पीडितले न्याय पाएको अनुभूति हुने गरी हामीले कानून बनाउने प्रयास गरेका छौं । कनूनलाई अझ कडा पार्ने प्रयास नभएको पनि होइन । बलात्कारीका सम्बन्धमा मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्नेसम्मको माग गरिएको थियो । तर, नेपाल विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सन्धि महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको मुलुक र मानवअधिकारको पक्षधर मुलुक भएकाले मृत्युदण्ड दिने कानून बनाउन सकिएन । धेरै महिलाको माग सर्वस्वहरणसहितको मृत्युदण्डको सजाय तोक्ने थियो ।
यो ऐन जारी गर्दा आउने समस्याका बारेमा हेक्का राखिएको छ ?
सबै पक्षलाई दृष्टिगत गरेर नै यो ऐन ल्याइएको हो । समस्या भनेको कानून कार्यान्वयन प्रक्रियामा हुन्छ । कार्यान्वयन क्रमशः हुँदै जान्छ र समस्याको समाधान पनि हुँदै जानेछ भन्ने विश्वास छ ।
यो विधेयक पनि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापित गरेर ल्याइएको हो । अन्य विधेयकमा मुलुकी भन्ने शब्द राखिएको छ तर यसमा राखिएको छैन किन ?
यो ऐन मुलुकी ऐनकै ठाउँमा ल्याइएको भए पनि यसमा राखिएका प्रावधान मुलुकी ऐनभित्रबाट ल्याइएको होइन । त्यसैले यसको नाममा मुलुकी भन्ने शब्द जोडिएको छैन ।
यो विधेयकको विशेषता बताइदिनुस् न ?
यो विधेयकमा अपराध संहिता र फौजदारी संहिताको अधीनमा रही ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कसूर ठहर भएपछि सजाय निर्धारण गर्नुुपर्ने, छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने, सजायको उद्देश्य विचार गर्नुपर्ने, खुला इजलाशमा सुनुवाइ गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने, बालबालिकालाई सजाय गर्दा विचार गर्नुेपर्नेलगायत विशेषता रहेका छन् ।